Maamul-goboleed bilaabay inuu saxaafadda SHARUUR siiyo & cambaarayn loo jeedinayo! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maamul-goboleed bilaabay inuu saxaafadda SHARUUR siiyo & cambaarayn loo jeedinayo!
Maamul-goboleed bilaabay inuu saxaafadda SHARUUR siiyo & cambaarayn loo jeedinayo!
(Ranchi) 21 Sebt 2019 – Maamul-Goboleedka Jharkhand ee uu ku badan yahay xisbiga BJP ee maamulo Raghubar Das oo dalka Hindiya looga yaqaanno Wasiir-goboleed ayaa Rs 15,000 oo Rubiga Hindiya u qorsheeyay TV-yada iyo wargaysyada maqaallo ”ay dowladdu la dhacsan tahay” ka qora howlaha uu maamulkaasi wado, sida daryeelka bulshada.
Qorshahan oo lagu shaaciyay war lasoo marsiiyay Waaxda Warfaafinta iyo Xiriirka Bulshada maamul-goboleedka Jharkhand, ayaa dhaleecayn ballaaran wajahaya, iyadoo uu Hemant Soren oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee maxalliga ah ee Jharkhand Mukti Morcha (JMM) uu dowladda Raghubar Das ku tilmaamay “mid jebisey xeer kasta oo ka degganaa anshaxa iyo qiyamka”.
Tillaabadan ayaa imanaysa bilo yar uun kahor xilliga doorashooyinka maxalliga ah ee dhacaya dhamaadka sanadkan, sida gobollada kale ee Haryana iyo Maharashtra, iyadoo uu xisbiga BJP ku adkaysanayo inay tillaabadan qaadeen kaddib markii ay sidaa ka codsadeen isla saxaafaddu, waloow ay saxafiyiinta maxalliyiinta ah ee Ranchi Press Club ay arrintan beeniyeen.
Maamul-goboleedka ayaa qorshahan ugu tala galay inuu doorto ilaa 30 weriye, kuwaasoo muddo bil gudeheed ah kusoo diyaarinaya mawaadiic horay loo xushay, marka ay sidaa yeelaan waxaa midkiiba la siinayaa Rs 15,000 oo rubi oo laga siinayo halkii maqaal/gabal muuqaal ah.
25 maqaal oo lasii doortay ayaa lagu soo bandhigi doonaa Waaxda Xiriirka Dadwaynaha, iyadoo ragga qorayna la siin doono Rs 5,000 oo rubi oo dheeraad ah. Arrintan ayaa lagu tilmaamay musuq iyo sharuur bixin ka dhan ah anshaxa saxaafadda iyo midka dowladda.
Previous articleArrin aad loo hadal hayo oo maanta ka dhacday magaalada Hargaysa + Sawirro
Next articleMaxay ku dhamaadeen kulamadii ay Somalia lakala ciyaartay Kenya & Burkina Faso? (Kenya & Somalia oo lafaha is ag dhigay) + Sawirro